မွေးနေ့မှာ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ချွေးထွက်အောင် အလှူအတန်းတွေ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ဖွေးစိန်လေး - Zeekwat Hot News
August 9, 20190148
ယနေ့ သြဂုတ်လ (၉) ရက်နေ့က ပြည်သူချစ် ဖွေးစိန်လေးရဲ့ အသက် (၃၁) နှစ်ပြည့် မွေးနေ့လေးဖြစ်ပြီး မွေးနေ့မှာ အလိုချင်ဆုံး ရိုးရှင်းတဲ့ စိတ်ချမ်းသာမှုတွေ ရခဲ့တာကြောင့် ဖွေးစိန်လေးတစ်ယောက် ကြည်နူးပျော်ရွှင်ခဲ့ပါတယ်။ ရိုးရှင်းတဲ့ သူမရဲ့မွေးနေ့လေးကလည်း မြင်သူတိုင်းကို ကြည်နူးစေခဲ့ပြီး အလှူအတန်းရက်ရောမှုများကြောင့်လည်း ပရိသတ်များက လွန်စွာချီးကျူးခဲ့ပါတယ်။
ဖွေးစိန်လေးက ချွေးတဒီးဒီးကျတဲ့အထိ သူမကိုယ်တိုင် ပြင်ဆင်လှူဒါန်းခဲ့ပြီး သူမရဲ့ရိုးရှင်းတဲ့ အလှူလေးအတွက် ကျေနပ်ပီတိဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
“My Simple Birthday ❣”ဆိုပြီး ယနေ့ရဲ့ မွေးနေ့အမှတ်တရပုံလေးများကို သူမရဲ့ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာမှာ တင်ခဲ့ပါတယ်။
ဖွေးစိန်လေးက အဖေနဲ့ အမေ ချက်ပေးခဲ့တဲ့ သီစုံပဲကုလားဟင်းနဲ့ လူ (၅၀၀) စာအတွက် လှူခဲ့ပြီး “သူစိမ်းအိမ်” အနုပညာရှင်များကလည်း မနက်အစောကြီးထဲက ပြင်ဆင်ကူညီပေးခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဖွေးဖွေးက “စာအိတ်လေးတွေထဲမှာ ၁သောင်းစီထဲ့ပြီး အိတ် ၁၀၀ ဝေဖြစ်ပါတယ် မာမီကွတ်ခိုးကိုးရာမဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်များ စောင့်ရှောက်ရေးကို ၁၁သိန်း မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအရုံး စက်မှုအလွှာအတွက် ဆန်၊ဆီ ၊ဆား လှူရန် ၂၀သိန်းဆီ မွေးနေ့အမှတ်တရလေး လှူဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ဖွေး ဒီနေ့လှူဖြစ်တာလေးတွေလည်း အားလုံး သာဓုခေါ်နိုင်ကြပါစေရှင်…. 😍😍😍” ဆိုပြီး သူမရဲ့ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာလေးမှာ ပရိသတ်များလည်း သာဓုခေါ်နိုင်အောင် ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
စိတ်ချမ်းသာစရာကောင်းပြီး မြင်သူတိုင်း ကြည်နူးစရာကောင်းတဲ့ ဖွေးဖွေးရဲ့မွေးနေ့လေးကို သဘောကျနှစ်သက်တယ်ဆိုရင် Like & Share ခဲ့နော်။
ယနေ့ သွဂုတျလ (၉) ရကျနကေ့ ပွညျသူခဈြ ဖှေးစိနျလေးရဲ့ အသကျ (၃၁) နှဈပွညျ့ မှေးနလေ့ေးဖွဈပွီး မှေးနမှေ့ာ အလိုခငျြဆုံး ရိုးရှငျးတဲ့ စိတျခမျြးသာမှုတှေ ရခဲ့တာကွောငျ့ ဖှေးစိနျလေးတဈယောကျ ကွညျနူးပြျောရှငျခဲ့ပါတယျ။ ရိုးရှငျးတဲ့ သူမရဲ့မှေးနလေ့ေးကလညျး မွငျသူတိုငျးကို ကွညျနူးစခေဲ့ပွီး အလှူအတနျးရကျရောမှုမြားကွောငျ့လညျး ပရိသတျမြားက လှနျစှာခြီးကြူးခဲ့ပါတယျ။
ဖှေးစိနျလေးက ခြှေးတဒီးဒီးကတြဲ့အထိ သူမကိုယျတိုငျ ပွငျဆငျလှူဒါနျးခဲ့ပွီး သူမရဲ့ရိုးရှငျးတဲ့ အလှူလေးအတှကျ ကနြေပျပီတိဖွဈခဲ့ပါတယျ။
“My Simple Birthday ❣”ဆိုပွီး ယနရေဲ့ မှေးနအေ့မှတျတရပုံလေးမြားကို သူမရဲ့ဖစျေ့ဘှတျစာမကျြနှာမှာ တငျခဲ့ပါတယျ။
ဖှေးစိနျလေးက အဖနေဲ့ အမေ ခကျြပေးခဲ့တဲ့ သီစုံပဲကုလားဟငျးနဲ့ လူ (၅၀၀) စာအတှကျ လှူခဲ့ပွီး “သူစိမျးအိမျ” အနုပညာရှငျမြားကလညျး မနကျအစောကွီးထဲက ပွငျဆငျကူညီပေးခဲ့ကွပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ ဖှေးဖှေးက “စာအိတျလေးတှထေဲမှာ ၁သောငျးစီထဲ့ပွီး အိတျ ၁၀၀ ဝဖွေဈပါတယျ မာမီကှတျခိုးကိုးရာမဲ့ ကိုယျဝနျဆောငျမြား စောငျ့ရှောကျရေးကို ၁၁သိနျး မွနျမာနိုငျငံရုပျရှငျအစညျးအရုံး စကျမှုအလှာအတှကျ ဆနျ၊ဆီ ၊ဆား လှူရနျ ၂၀သိနျးဆီ မှေးနအေ့မှတျတရလေး လှူဖွဈခဲ့ပါတယျ ဖှေး ဒီနလှေူ့ဖွဈတာလေးတှလေညျး အားလုံး သာဓုချေါနိုငျကွပါစရှေငျ…. 😍😍😍” ဆိုပွီး သူမရဲ့ဖစျေ့ဘှတျစာမကျြနှာလေးမှာ ပရိသတျမြားလညျး သာဓုချေါနိုငျအောငျ ရေးသားခဲ့ပါတယျ။
စိတျခမျြးသာစရာကောငျးပွီး မွငျသူတိုငျး ကွညျနူးစရာကောငျးတဲ့ ဖှေးဖှေးရဲ့မှေးနလေ့ေးကို သဘောကနြှဈသကျတယျဆိုရငျ Like & Share ခဲ့နျော။
ပန်းဆီရောင်လေးပွဲတက်ဖက်ရှင်နဲ့ တောက်ပလွန်းနေတဲ့ မင်းသမီးချောလေး ခင်ဝင့်ဝါရဲ့ပုံရိပ်….